पानीपुरीमा पिसाब मिसाइरहेको भिडियो भाइरल, भिडियोसहित – Jagaran Nepal
पानीपुरीमा पिसाब मिसाइरहेको भिडियो भाइरल, भिडियोसहित
Jagaran Nepal बुधबार, भाद्र ०९, २०७८
काठमाडौं । पानीपुरीमा पिसाब मिसाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उक्त घटना भारतको आसामस्थित गुवाहाटी क्षेत्रको हो। भिडियोमा ठेलावालाले जगमा पिसाब गरेर पानीपुरीमा पानीमा मिसाइरहेको देखिन्छ।
उक्त भिडिओ भाइरल बनेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। ठेला सञ्चालक ६० वर्षीय अक्रुल सहानीलाई प्रहरी पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पिसाब मिसाइरहेको भिडियो अमर ज्योती नामक फेसबूकबाट सार्वजनिक गरिएको थियो। हेर्नुहोस भिडियो भिडियो
यसको नाम लिनसाथ तपाईंको मुखमा पानी आउँछ । गोलाकार पुरी, आलु-मसला र अमिलो-टर्रो पानी । खासगरी युवतीहरु यो खान्कीमा लोभिएका छन् । पानीपुरी स्टि्रट फुड हो । शहरका सडक किनारमा जताततै पानीपुरी उपलब्ध छ । अहिले चिनियाँ परिकार ‘लाफिङ’ जहाँ बेचिन्छ, त्यहाँ पानीपुरी पनि उपलब्ध गराइन थालिएको छ ।
पानीपुरी खासमा भारतिय परिकार हो । अर्थात भारतको रैथाने परिकार । पिरो, अमिलो, टर्रो स्वादको यो परिकार सडकदेखि रेष्टुरेन्टको मेनुमा सम्म उपलब्ध हुन थालेको छ । शहरका यस्ता चोक र गल्ली सायदै होलान्, जहाँ पानीपुरीको दोकान छैन । रमाइलो त के भने अक्सर पानीपुरी युवतीहरुको पि्रय खान्की हो । जहाँ पानीपुरीको दोकान थापिन्छ, त्यहाँ युवतीको झुन्ड देखिन्छ ।यद्यपी यो सबै वर्ग, लिंग र उमेरका उपभोक्ता लोभ्याउने खान्की हो । अर्थात सर्वपि्रय परिकार ।
कसरी सुरु भयो पानीपुरी ? भारतमा यसलाई पानीपुरी एवं गोलगप्पे दुबै नामबाट चिनिन्छ । गोलागप्पा उर्दू शब्द हो । यसको अर्थ हो गोलो पुरी जस्तै चिजमा आलुको चटपटे मिसाइएको । पानीपुरीको गोलाकार पुरी मुखमा एकै गाँसमा खान सकिन्छ । यही कारण यसलाई गोलगप्पा भनिएको हो । अंग्रेजी शब्दकोशमा गोलगप्पेको अर्थ ‘पानीले भरिएको इन्डियन ब्रेड’ भिनएको छ । यसको शाब्दिक अर्थ हो, पानीको रोटी । सन् १९९५ मा यस परिकारलाई गोलगप्पा नाम दिइएको हो ।
पानीपुरी कसरी बन्छ त ? पानीपुरी अटा वा सुजी मिलाएर बनाइन्छ । भुक्क फुलेको गोलाकार रोटीमा एकातिर सानो प्वाल बनाइन्छ । त्यसमा आलु लगायत मसलाको मिश्रण राखिन्छ। अब इमली पानी हालेर पानीपुरी खान सकिन्छ ।
यस किसिमको पानीपुरी भारतको बनारसबाट सुरु भएको मानिन्छ । हुन त भारतको विभिन्न राज्यमा पानीपुरी निकै रुचाइन्छ । साथै फरक फरक प्रदेश एवं क्षेत्रमा यसको नाम पनि केही फकर छ । जस्तो महाराष्ट्रमा पानीपुरी भनिन्छ, पश्चिम बंगालमा पुचके, गुजरातमा पकोडी ।
स्वादिलो तर हानिकारक हामीकहाँ पानीपुरी खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो मानिदैन । के त्यसो भए पानीपुरी अस्वस्थ्यकर खानेकुरा हो ?पक्कै होइन । पानीपुरीलाई स्वस्थ्यकर ढंगले बनाउने र खाने हो भने यसले स्वास्थ्यलाई कुनै हानी गर्दैन । यद्यपी हामी बजारमा उपलब्ध पानीपुरी खान्छौं । त्यसमा पनि सडक किनारमा राखिएको । ति पानीपुरी बनाउने तौर-तरिका स्वस्थ्यकर छैनन् ।
पुरी बनाउनेदेखि आलु मिश्रण गर्ने वा इमली बनाउने सबै कुरा अस्वस्थ्यकर ढंगले गरिन्छ । त्यही कारण त पोषणविदहरुले बेलाबखत चेतावनी दिन्छन्, ‘पानीपुरीले स्वास्थ्य बिग्रन्छ है ।’
पानीपुरीमा हानिकारक मिसावट त्यसो त बजारमा उपलब्ध पानीपुरी स्वस्थ्यकर ढंगले बनाइदैन । पुरी बनाउनका लागि प्रयोग गरिने तेल होस् वा आलु सबै अस्वस्थ्यकर हुनेगर्छ । कतिपय अवस्थामा के पनि पाइएको छ भने पानीपुरीमा हानिकारक मोविलजस्तो देखिने पदार्थ समेत प्रयोग गरेका छन् । सरकारी अनुगमनका क्रममा पानीपुरीमा हानिकारक पदार्थ मिश्रण गरिएको पाइएको छ । हेर्दा खानेतेल जस्तो देखिने ति पदार्थ अखद्य तत्व रहेको पनि पुष्टि भएको छ ।
पानीपुरी बेच्न प्रतिबन्ध कतिपय ठाउँमा पानीपुरी बिक्री वितरणमै रोक लगाएको खबर पनि सुनिने गरिएको छ । मानव स्वास्थ्यमा गंभिर असर गर्ने पदार्थ मिश्रण गरेर बनाइने भएकाले पानीपुरी प्रतिबन्ध लगाएको बताइन्छ । बाग्लुङमा यसअघि अखाद्य पदार्थ मिसाएको, जथाभावी ढंगले बेचिएको भन्दै पानीपुरी विक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
पानीपुरी सेवनकै कारण मान्छेहरु बिरामी परेको खबर पनि बेलाबेला आउने गर्छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नरपालिका, रामघाटको सिन्चुमा चटपटे र पानीपुरी खाँदा ४३ जना बिरामी परेका थिए ।
क्यान्सरको खतरा हालै प्रकासित एक खबर अनुसार पानीपुरीको सेवनले क्यान्सर जस्तो घातक रोग लाग्नसक्ने बताएको छ । पानीपुरीको अधिक सेवनले कलेजोलाई निकै हानि पुर्‍याउने गर्छ । पानीपुरीमा मिश्रण गरिएको कृतिम रंग र अखाद्य पदार्थ आन्द्राको लागि हानिकारक हुने बताइन्छ ।
पानीपुरी बनाउने, बेच्ने क्रममा जति लापरवाही गरिएको हुन्छ, त्यसले आन्द्राको क्यान्सर गराउने संभावना रहन्छ । धनिया, पुदिना, चटनीको स्थानमा पानीपुरीको पानीमा कृतिम रंग मिसाइन्छ । साथै सडेगलेको खानेकुरा प्रयोग गरिन्छ । पानीपुरी घरमै बनाएर स्वस्थ्यकर ढंगले सेवन गर्न सकिन्छ । यद्यपी बजारका पानीपुरी सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा गंभीर असर गर्न सक्छ ।
तपाईंको हत्केलामा पनि ‘H’ अक्षर छ ? यसको रहस्य जानेर तपाईंको होस उड्नेछ, जान्नुहोस् यसको अर्थ !
कुनै पनि मानिसको भविष्य उसको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईंले सुन्नु भएको नै होला। यसलाई एक मजाक मान्नु गलत हुन सक्छ। तपाईंको हत्केलाका रेखाहरुले साँच्चै तपाईंको भविष्य बताउन सक्छ। यी रेखाहरुमा लुकेको रहस्य जानेर तपाईं आफैं आश्चर्यचकित हुनु हुनसक्छ। हस्तरेखा शास्त्रमा कुनै व्यक्तिको हत्केला हेरेर उक्त व्यक्तिको व्यक्तित्व, भाग्य र भविष्य बुझ्न सकिन्छ। मानिसको हत्केलामा रहेको हरेक रेखा तथा वक्र उक्त मानिस भित्र लुकेको सकारत्मक तथा नकारात्मक पक्ष देख्न सकिन्छ।
हस्तरेखा शास्त्रमा केवल व्यक्तिको हत्केलाहरु पढ्ने मात्र नभएर मानिसको औंलाहरु र नङहरु पढ्ने कला सामेल छन्। यसमा, हातको आकार, आकार वा औंलाहरु को लम्बाई र एक व्यक्तिको हात को लचीलापन को माध्यम बाट, उनको व्यक्तित्व र भविष्य बुझ्न सकिन्छ। यदि तपाईंले कहिल्यै ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भने हाम्रा हत्केलाहरुमा थुप्रै रेखाहरु अजीब तरीकाले बनेका हुन्छन्। यसमा हरेक रेखा र वक्रको निश्चित रूपमा केहि अर्थ हुन्छ। के तपाईंलाई थाहा छ कि यदि तपाईंको हत्केलामा ‘H’ अक्षर बनेको छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?
हत्केलामा मा यो ‘H’ तीन रेखाको मददले बनेको हुन्छ। यी हाम्रो मुटु, भाग्य र मस्तिष्कको रेखाहरु हुन्। हत्केलामा जब यी रेखाहरु मिल्छन्, एक ‘H’ अक्षर बन्छ। आज हामी तपाईंलाई यसको अर्थ बुझाउँछौं…..
भनिन्छ कि जसको हत्केलामा यो H’ हुन्छ, उसको जीवनमा ४० वर्षपछि केहि सफल परिवर्तन देखिन्छ। जब उनीहरुले उमेरको यो चरण पार गर्छन्, उनीहरु आफैंलाई लाग्छ कि उनीहरुको जीवनले राम्रो यू टर्न लिएको छ। जबकि ४० वर्ष भन्दा पहिले यी मानिसहरुलाई आफ्नो मेहनतको अपेक्षित फल प्राप्त हुँदैन। यी मानिसहरु ४० वर्ष भन्दा पहिले आफ्नो आवश्यकताहरु पूरा गर्न संघर्ष गर्दछन्।
यी मानिसहरुले ४० पार गरेपछि मात्र आफ्नो मेहनतको फल पाउँछन्। व्यवहारको बारे मा कुरा गर्दा जसको हात मा यो ‘H’ बनेको हुन्छ, उनीहरु धेरै भावुक स्वभाव हुन्छन्। यस्ता मानिसहरु अरु मानिसलाई मद्दत गर्न सधैं तयार हुन्छन्। यति मात्र हैन, उदार स्वभावको कारण यी व्यक्तिहरुले धोका पनि पाउने गर्छन्। यस्ता मानिसहरु सकारात्मक सोचका धनि हुन्छन्।